ခရစ်စတီးနား | Myanmar Model
ခရစ်စတီးနား Like this:Like Loading... 111 comments so far Elizabeth
May 28, 2008	Hi!
June 12, 2008	thu ka totayan sexy ma kya par buu
dar pay mat yote soo tal……
August 21, 2008	i like her because she have natural beauty.
October 1, 2008	i love her
December 5, 2008	body beauty ကစားသင့်တယ်… ရုပ်ရည် လှဖို့ ထက် … အဝမလွန်ဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်…😛
December 8, 2008	အမကမူစလင်မလား အမ၀တ်ချလိုက်၇င်ကောင်းမှာ
December 10, 2008	i want new photo
January 2, 2009	sexy လဲမကျ attraction လဲမရှိနဲ့ မိုက်ပါဘူးဗျာ။ ဘာလို့ သူ့ ဓါတ်ပုံေ တွကိုအချိန်ကုန်ခံ upload လုပ်ထားလဲဒီအတိုင်းBlank ကြီးကမှဆွဲေ ဆာင်မှုရှိအုံးမယ်။(ဘာလဲဟ ဘာလဲဟ ဆြိုပီး)
January 3, 2009	လှပါတယ် ဒါပေမယ့် ခရစ်ယန် ဖြစ်လို့ မကြိုက်ပါ
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာ ဘာသာအရ မခွဲခြားပေမယ့် လူမျိုးချင်း ကွာလို့ လှပေမယ့် မကြိုက်ရက်ပါဘူးဗျာ
January 12, 2009	ငါ ကြိုက်လို့ပါဟ။ ဒီက လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေးပဲနော်။ ဟဲဟဲ။
January 24, 2009	လှတော့လှတယ်… ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအလှလဲမသိဘူး။
January 25, 2009	့လှတယ် တောင့်တယ်
February 11, 2009	အဲ့ ဒီ ကောင်မလေးကို ဟိုတော်လှန်ရေးဇာတ်ကားတစ်ခုမှာစတွေ့ ဖူးတာ
သရုပ်ဆောင်တာကော နောက် သူ့အလှပါ သဘောကျမိပါတယ် ……..
ဘ၀ပေး ကုသိုလ်ပေါ့ ဗျာ
ဘာမှ မနာလို မဖြစ်ကြပါနဲ့………………..
February 16, 2009	အသားဖြူတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆိုမကြိုက်ဘူး လူမျိုးမပီသဘူး
February 18, 2009	i want to fuck to her
March 6, 2009	i need update photo
hi, khrist’ do you haveaboy friend??
June 6, 2009	ကောင်းမှ ကောင်းပေါ့ 
မိန်းမ ဆို အားလုံးကြိုက် တယ်
အားလုံးနဲ့ ကို ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်ကွ
June 8, 2009	ဘယ်သူကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ကျနော်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာ
ခရစ်စတီးနားဆို ခုရ ခုယူမှာပဲ ဟီး ဟီး
July 11, 2009	ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ ဓါတ်ပုံအကုန်လုံးကိုယူလိုက်တယ်
ဟဲဟဲ သိတယ်မဟုတ်လားဘာလုတ်ဘို့ ဆိုတာ
July 14, 2009	အမ ပရိသတ်အတွက် စိတ်ချမ်းသာဖို့စကားတစ်ခွန်းလေး ပို့ ပေးပါရန်
2009 ခုနှစ် ကော့ဒွတ်စံပြကျေးရွာ၊ ဈာပနပွဲတော် လက်ဝှေ့ပွဲဝိုင်ပေါ်မှာ အမရဲ့ကိုယ်လုံး(ဖင်း)
July 15, 2009	ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် ၀တာ မဟုတ်ပါဘူး ပြည့်ဖြိုးတာပါ အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ် လူ ကိုပဲ ကြည့်ပြောတာ ပါနောက် ခံ ဘာသာမစဉ်းစားမှီတာ ကောင်းတယ်နော်😛
July 28, 2009	မင်းကိုမြင်စကတည်းက ကြိုက်သွားတာ..စိတ်ထဲမှာတော့ အကြိမ်ကြိမ်တွယ်ပြီးပီ.
July 30, 2009	i love her about herself and her action .
July 30, 2009	လောကကြီးမှာကဲရဲ့တာလဲရှိမယ် မြှောက်ပင့်တာလဲ ရှိမယ်
ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ ဘာကိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုထက် ဘယ်ဟာကိုလုပ်ရင်ပိုသင့်တော်မလို့ဆိုတာကိုသာရွေးပါ
August 25, 2009	အရမ်းလှတယ်ဗျာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေမှာ ရမ်းစွဲလမ်းနေပြီဗျာ
November 11, 2009	အရမ်းလှတယ်ဗျာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေမှာ ရမ်းစွဲလမ်းနေပြီဗျာ
August 2, 2010	မမ..
မမ က သိပ်လှတာပဲနော်…ကျွန် မမ ကိုအမြဲးအားပေးနေပါတယ်…..
အောင်မြင်ပါစေ မမ ကံကောင်းပါစေ….ကိုယ်တော်ထံ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်…နော်
မမ …မမကိုအရမ်းကြိုက်တဲ့ မမရဲ့ ပရိတ်သတ်ပါ ဓာတ်ပုံလေးပို့လို့ရရင်ပို့ပေးပါရုပ်ရှင်ကာတွေပါပို့ပေးနော်….ganjallay@gmail.com
December 20, 2010	ကဗျာဆန်တဲ့အလှလို့ပဲပြောရမလား နှာဘူးတွေကြိုက်တဲ့အလှလို့ပဲပြောရမလား
February 12, 2011	ဘ၀ဆိုတာ..အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေရတာပါ…အရာ၂အားလုံးကို..မ္တောစိတ်ရှိနေဘို့ အဓိကပါ..ကျနော်အမြဲမျော်လင့်နေတယ်..ထာဝရသာယာလှပနေပါစေ..
April 23, 2011	ရုပ်လှဖို့ ထက်စိတ်လှဖို့ ကပိုအရေုးကီးပါတယ်
April 26, 2011	ဓာတ်ပုံလေးပို့လို့ရရင်ပို့ပေးပါ please Chris
May 15, 2011	ကျွန်တော်ကမမကိုစတွေ့ တာနဲ့ချစ်တာ
May 30, 2011	မမကအရမ်းလှတယ်ဗျာ…..မ်ိန်းမပိသတယ်ဗျာ……”အိုင် လတ်စ် ယူ….”
sue thit eaim
June 28, 2011	hi
June 28, 2011	ခရစ်စတီးနားနဲ့အရမ်းတူတဲ့ သူလေးတစ်ယောက် …တွေ့ ထားပါတယ်…
July 19, 2011	အရမ်းအိပ်ချင်တဲ့ သူလေးတစ်ယောက်တွေ့ ထားတယ်။
July 20, 2011	မိတ်ဆွေ တို့ သတိထားပါဗျာ
July 24, 2011	ခင်မင်ခွင့်ရချင်ပါတယ်
July 26, 2011	မမကချစ်ဖိုဲကောင်းတော့လီးလို့ လဲကောင်းမှာပဲနော်ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောစီင်္တ်မပြတ်သွားနဲ့ နော်မမစောက်ဖုတ်ဘယ်လောက်ကျယ်နေပါစေကျွန်တော်လျှာနဲ့ လျှက်ချင်မှုတ်ချင်တယ်လီးနဲ့ လဲလီးချင်တယ်တစ်ကယ်လုပ်ရရင်သေပျော်ပါပြီဗျာမမခရစ်စတီးနား
July 31, 2011	လှပါတယ်ဗျို.
August 22, 2011	ပရိသတ်ကနေ မိတ်ဆွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား
September 22, 2011	koaungthu2011@gmail.com
October 1, 2011	သူများကိုဒီလိုပြောနေတဲ့ သူတွေနှစ်မချင်းမစာနာပြောသူတွေ….တစ်ခုလောက်ပြောချင်ပါတယ်…………..ကိုယ့် နှစ်မကြတော့ဖာဖြစ်နေတာသိလား………….အရင်ဆုံးလေ့ လာ………..ခင်များနှစ်မဖာဖြစ်နေပြီ..ဖာ…ဖာ..ဖာ.ဖာ.ဖာပဲကျနော်ချချင်တယ်ပြောပေးပါလား..ကိုတုတ်ကြီး……ဟဲဟဲ
October 1, 2011	rgfdv
October 1, 2011	cvf
October 1, 2011	အဒီလိုမပြောကြပါနဲ့ နှစ်မချင်းကိုချင်းမစာနာ……..ကိုယ်နှမဖာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသိရက်လားခင်များနှစ်မဖာဖြစ်နေတယ်အရင်လေ့ လာပါသိအောင်…………သိပြီးရင်ပြောအုံး……….ကျနော်လဲပါချင်လို့ …ဟဲဟဲ…..ဟားဟား……..ဟဲ…….ကိုတုတ်ာကီးခင်များကိုပြောနေတာ…..ကြောင်တောင်တောင်မလုပ်နဲ့ ……..မီးပွင့် သွားမယ်……….ခင်များနှစ်န..ဟဲဟဲကြီးတယ်နော်…………………
October 1, 2011	အမကြိုးစားပါအားပေးနေတယ်
October 2, 2011	I love you Christina. I like your photos very much.
October 2, 2011	I love you Christina.
November 4, 2011	ဒါလား မြန်မာဆိုတာ
December 4, 2011	ပဇွန်ထုပ် ကြီးကျနေတာပဲ
December 14, 2011	ငါ လိုးမသားတွေ နှမချင်း ကိုယ်ချင်းမစာပြောကျနေကျတရ် မင်းတို့နှမ ညပိုင်းထွက်ပြီး ဖာခံနေတာ ကို ရော ကျလားကွ…..သူများ ကို ပြောပို့ပဲ တွေးနေကျတာ မင်းတို့နှမတွေ ညပိုင်း သူတို့ရည်းစားနဲ့ (ဖင်)ခံရင်ခံ မခံရရင် တွေ့ တဲ့ သူ ကို လိုက်ကုန်နေတာ သိကျလား ….
January 1, 2012	မြန်မာလူမျိုး ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်
ကိုယ့်ကို ဘယ်သူမှ မမြင်ရဘူးဆိုပြီး ရိုင်းချင်တိုင်း ရိုင်းနေကြတယ်
အံ့သြစရာကောင်းတာက ကိုယ်လုပ်တာ သိနေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာ မသိသူတွေ
ဆိပ်ကွယ်ရာဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာ မသိသူတွေ
မည်သည့် ဘာသာ ၊ မည့်သည့်လူမျိုး ဖြစ်နေပါစေ ရိုင်းတဲ့သူက ရိုင်းတာပါပဲ
တကယ်ဆို ဒီလို စာရေးသားခွင့်တွေ မရှိတာ ကောင်းပါတယ်
မတော်တဆ ကြည့်မိရင် ဒေါသဖြစ်ရမယ် ။ အကုသိုလ် အရမ်းများပါတယ်
သတ္တ၀ါဟူသည် ကံစီမံရာတယ် ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ကိုယ့်ထံ ပဲ့တင်သံ။
ညီမလေးရေ . . . လူရိုင်းတွေပေါတဲ့ခေတ်မှာ သည်းခံပြီး နေတတ်အောင်ကြိုးစားပါ
အားပေးနေပါတယ် . . .
(ရိုင်းစိုင်းတဲ့သူတွေ နှမချင်းမစာနာသူတွေ အကုသိုလ်အကျိုးပေးပြီး ငရဲကျပါစေ)
January 8, 2012	မမ ရေ အားပေးနေတယ်နော် ကြိုးစားထား
ထာ ၀ရ အားပေးလျှက်
January 12, 2012	အားလုံးက မြန်မာလူမျိူး တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုစကားတွေကို မျပြာသင်ပါဘူး သူငယ်ချင်တို့ရေ မင်းတို့ငါတိုက မြန်မာနိုင်ငံမှာနေကျတဲ့ အတွက် မရိုင်းသင်ဘူးလိုတော့ထင်ပါတယ်
January 20, 2012	အစ်မရေ
February 20, 2012	အားပေးနေပါတယ်နော်..ဆက်လက်ကြိုးစားပါနော်..စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်သစ်ပင်ဆိုတာမြင်.လေလေတိုက်
March 20, 2012	very lovely
March 22, 2012	အမ…ဒီထက်ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေ…။
March 30, 2012	ဝိတ်နည်းနည်းလျှော့လိုက်အုံး……………….
April 8, 2012	ဖင်ကုန်ပြီးဆောင့်လိုက်ရလို့ကတော့ကွာ ချစ်လေးမောင့်ကိုဆက်သွယ်ပါလားလိုးပေးမယ်
April 12, 2012	လိုချင်တာပဲသိတယ်ကွာ။
July 9, 2012	ရစီကွတ်ချင်တယ် တီနားရယ်
August 19, 2012	မိတ်ဆွေဖြစ်လို့မရဘူးလား မမ
အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်နိုင်ပါစေ……..
September 8, 2012	very beautyful
September 12, 2012	Hello,အမbodyကတော.တော်တော်မိုက်တယ်နော်Gmailကောင်.ရှိရင်ပေးပါလား……ကျွန်အကောင်.ကloveheromkk44ပါ…….
September 16, 2012	တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ ….ဘာဖြစ်လို့ ဖင်ကြီးနေတာလဲ
November 19, 2012	အမကအသက်ဘယ်လောက်လဲ-ပြောပြပါလား =—
January 25, 2013	ဖင်ကြီးကကားနေတာဘဲ
February 20, 2013	very pretty you are
March 22, 2013	ဒီလိုပါပဲ သူလဲ သူများတွေလိုပေါ့ အားလုံးအတူတူပဲ
June 24, 2013	ငါလည်း သူနဲ….zzzzzzzzzzzz
July 21, 2013	လိုချင်းလိုက်တာ ခရစ်စတီးနားဖင်ကြီးကို သိပ်သိပ်ကြိုက်
July 21, 2013	နို့နှစ်လုံးကိုခပ်ပြင်းပြင်းကိုင်ပြီးလိုးချင်တာ
September 6, 2013	အမက ကုလားချောလေးနော်
September 6, 2013	မသာကောင်တွေလျှောက်ပြောတာကိုအမစိတ်ထဲမထည့်နဲ.နော်
March 19, 2014	မြန်မာဆန်ဆန်လေးပိုလှတယ်
March 24, 2014	မမ က မူစလင်လား
March 29, 2014	မင်းတို့တွေရေးသလိုငါလည်းရေးလိုက်ချင်တယ်
April 8, 2014	အားလုံးကိုချစ်တက်ပါတယ်
October 27, 2014	Im Atoelayko Heanaybarto,..
November 20, 2014	hello Barlook Naybarlay Ha! Toetoe heanaybarlar!,..
November 27, 2014	ငခွေးတွေ စောက်ဖုတ်တခုနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်
December 2, 2014	hello Ninbarlooknaybarlay,.. anako Tityabartaha,.!
December 3, 2014	Minkhalar Bar ,.. ThadidYabarta,.!
December 4, 2014	hello minkhalarbar nayknow barlar,.!
December 5, 2014	Im Thukha Mimasodoe Chityamarpot,..
December 7, 2014	hello Barlook Naybarlay,.!
December 8, 2014	Ayethukha Mima Sodechityamarbar,..
December 9, 2014	Im Mima Khahea Dasodoe chityamarpoe,.!
December 11, 2014	Aww Mima Nagakha Chitlikeyadar,.!
December 17, 2014	hello barlook nay barlay,..
January 2, 2015	Aww Lyin naybarta So Lay Balolook May,..
January 23, 2015	hello barlook naybarlay,..
January 28, 2015	hello Min Kha Larbar ,..
January 29, 2015	hello nayknow barlar barlook naybarlay,..?
February 5, 2015	hello barlook Nay Nayknowbar lar,.?
February 10, 2015	hello Min Kha Larbar,..
February 16, 2015	hello min kha larbar nayknow barlar,..
March 10, 2015	ခင်လို့ရမလား
March 24, 2015	Eiei Kubarlook Naybarlay,.. Ha,..
April 4, 2015	hi hello Barlook naybarlay,..
May 21, 2015	အော် အတော်လည်းကိုလှပါတယ် မိမဆိုတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ကြိုးစားပါ အားပေးနေပါတယ် ။ မောင်ချစ်သူ…
May 22, 2015	မနက်ဖန်ရောက်တိုင် ကြိုးဖို့ရာ အကုန်သူအတွက်ပါ .။
May 24, 2015	နေ့စဉ်ဘ၀အတွက်ကြိုးစားနေကြတဲ့ လူတွေဘာကြောင့်များ တန်ဘိုးထားသည့်အချိန်ကာလတွေကို .။
May 25, 2015	ဟေးလို.။
May 30, 2015	မမ ရယ်
မမ စောက်ဖုတ် ကို အားရပါးရ ယက်ပေးမယ်
ဖင် လည်း ယက်ပေး ချင်တယ် မမ ရယ်
မမ ခရစိစတီးနား ရဲ့ စောက်ပက် ယက်ရရင် သေပျော်ပါပြီ ဗျာ
June 1, 2015	hi hello minkha larbar,..
August 17, 2015	အော်ရေနဲ့မျောကုန်ဘကပြီလို့ပြောနေကြပါ ရှိ့နေကြသေးပါလား..။